Galmudug oo wali ciidamo ku sii daad-gureyneysa Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
Galmudug oo wali ciidamo ku sii daad-gureyneysa Dhuusamareeb
Ciidamo xooggan oo ka tirsan kuwa Xoogga Dalka Soomaaliya, ayaa maalintii shanaad ka degaya Dhuusamareeb, si ay garab u siiyaan kuwa Galmudug oo doonaya in ay dib ula wareegaan Gueiceel.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Wararka ka imaanaya magalaada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, ayaa sheegaya in ay maanta ka degeen Ciidamo xooggan oo ka tirsan Gorgor, kuwaas oo la filayo in ay qeyb ka noqdaan ciidamada maamulka Qoorqoor, u diyaarinayo, in ay dib u so celinta Guriceel.
Ciidamada maanta la geeyay GM, ayaa ka tirsan Ururka 5-aad ee Gorgor, kuwaas oo hore u joogi jiray Magaalada Dhuusamareeb, ka hor inta aan dhawaan dib loogu soo celin Muqdisho, waxa ay ku biirayaan Ururka 13-aad, Guutada 17-aad ee kumaandooska oo hore Dhuusamareeb u joogay.
Ciidanka maanta la geeyay Dhuusamareeb, waxaa hoggaaminaya, Gaashaanle Maxamed Dhagawayne, oo ka mid ah saraakiisha ciidanka ee caanka ka ah Galgaduud.
Shantii maalin ee la soo dhaafay waxaa Garoonka Diyaaradaha Dhusamareb ka dagayey Ciidamo kala duwan oo ka imaanaya caasimadda Somaaliya xili Ahlusunna wali ay gcanta ku hayso Guriceel.
Galmudug ayaa ku jirta gurufkii ugu danbeeyay oo ay isku diyaarineyso in ay dib gacanta maamulka ugu soo celiso degaanno uu ay ka mid tahay magaalada Guriceel, waxaana maanta dhaq-dhaqaayo ciidan laga soo sheegay waqooyiga magaaladaas.
Wax-garadka iyo siyaasiyiinta, ayaa ku baaqaya in xasaradaha soo cusboonaaday lagu dhameeyo lagu dhameeyo wada-hadal, hayeeshee, labada dhinac ayaa u muuqda kuwo aan wada-xoojood diyaar u ahayn.